जुन दिन मैले चीनमा पारवहन र आवागमनसम्बन्धी सम्झौता गरें, त्यसै दिनबाट यहाँ खेल सुरु भइसकेको थियो | News Dabali
जुन दिन मैले चीनमा पारवहन र आवागमनसम्बन्धी सम्झौता गरें, त्यसै दिनबाट यहाँ खेल सुरु भइसकेको थियो
October 12, 2016 | 5:48 pm
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुगनपुग १० महिना सरकारको नेतृत्व गरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ। ०७२ असोज २४ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा ३ सय ३८ मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव ०७३ साउन ९ गते ३ सय ६४ मतले पारित भयो । कुल ५ सय ९५ सदस्यमध्ये २ सय १० मत उहाँले नेतृत्व गरेको सरकार र गठबन्धनका पक्षमा कायम रह्यो । यद्यपि, अनुपस्थित/बिरामीसमेत गरी गठबन्धनको पक्षमा कुल २ सय २३ मत स्पष्ट थियो ।
‘केही काम नगरी लामो समय सरकारमा टिक्ने वा फटाफट काम गरेर अघि बढ्ने ? मेरा सामु दुईवटा विकल्प थिए र मचाहिँ दोस्रो विकल्प रोजेर अघि बढें,’ धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको आफ्नै कार्यकक्षमा उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री बनिरहँदा देशमा आगो बलिरहेको थियो, तर अहिले अत्यन्त सामान्य र सहज अवस्थामा बनेको बताइरहँदा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ– ‘मेरो नेतृत्वको सरकार हटाइहाल्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा सरकारले गरेको काम नै सर्वोपरि महत्वको काम हो ।’ पार्टीको तर्फबाट मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालपछि चौथो प्रधानमन्त्री बन्नुभएका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राष्ट्रिय राजनीति र आम जनताको बीचमा अत्यन्त सकारात्मक छाप छाड्न सफल हुनुभएको छ ।
अविश्वास प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा १ घन्टा ५४ मिनेट लामो मन्तव्यमार्फत उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको सविस्तार चर्चा गरिसक्नुभएको छ । २०७३ साउन २५ गते अपराह्न पार्टी अध्यक्षको कार्यकक्षमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ‘नवयुग’का लागि एक घन्टा लामो कुराकानी गरिएको थियो । प्रस्तुत छ– ‘नवयुग’ को भदौ अङ्कमा प्रकाशित, उक्त पत्रिकाका प्रधानसम्पादक योगेश भट्टराई, सम्पादक सूर्य थापा र कार्यकारी सम्पादक विष्णु रिजालले गर्नुभएको उक्त अन्तर्वार्ताको विस्तृत अंशः
० नेकपा (एमाले)का तर्फबाट चौथोपटक मुलुकको नेतृत्व गर्नुभयो र झन्डै १० महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । यस अवधिका अनुभवहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
मूलतः मेरो अनुभव सुखद रह्यो । मैले संसदीय दलबाट पूराका पूरा साथ–सहयोग पाएँ, पार्टीबाट पूराका पूरा साथ–सहयोग पाएँ । आम जनसमुदाय, स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ठूलो समर्थन पाएँ । खासगरी युवा र नयाँ पिँढीबाट ठूलो समर्थन पाएँ । त्यो मेरा निम्ति सुखद अनुभूति रह्यो ।
म जस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएँ, त्यो असाधारण र असमान्य थियो, द्वन्द्व, भीडन्त र मारामारको अवस्था थियो । सिङ्गै तराई बल्दै थियो, नाकाबन्दी थियो । साह्रै असहज र अप्ठ्यारा चुनौतीहरू थिए, खतराहरू थिए, विकराल समस्याहरू थिए । ती सबैको सामना गर्नु थियो । दक्षिणी छिमेकीसँग हाम्रा सम्बन्धहरू धेरै बिग्रिएका थिए, तनावपूर्ण अवस्था थियो । त्यसकारण, नाकाबन्दी भोग्नुपरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण आपूर्तिमा अस्तव्यस्तता थियो । राष्ट्रिय जीवन नै अत्यन्त कष्टकर अवस्थामा थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि म भारत गएँ । त्यहाँ उच्चस्तरका कुराकानीहरू भए र सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काइयो । हामीले भारतसँग नयाँ–नयाँ सम्झौताहरू पनि ग¥यौं । त्यसबाट मुलुकलाई फाइदा भएको छ ।
भारतबाट फर्किएको तीन हप्तामै म चीन भ्रमणमा गएँ र चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौताहरू गरें, जसबाट नेपाललाई एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा वास्तविक अर्थमा उभ्याउने काम भएको छ । मैले विकास निर्माणका निम्ति केही सोच, दृष्टिकोण र अठोटहरू प्रस्तुत गरें र तिनलाई अगाडि बढाएँ । ती असाधारण महत्वका छन् र तिनले हाम्रो विकासको इतिहासमा नेपाललाई नयाँ ढङ्गले तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने काम गरेका छन् । हामीले फोहोरमैला व्यवस्थापन र ग्यासका कुराहरू ग¥यौं, रेलवे निर्माण गर्ने र सडकहरू चौडा गर्ने कुराहरू ग¥यौं । विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूदेखि अनेक क्षेत्रमा नयाँ कामहरू सुरुआत ग¥यौं ।
तराईको विकासका लागि ध्यान दिने, तराईमा सहरी विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने र सिँचाइका प्रबन्धहरूदेखि पूर्वाधार विकासका धेरै कुरा भए । सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा हामीले धेरै ठूला र दूरगामी महत्वका कामहरू ग¥यौं । ग्रामीण क्षेत्रका लागि ठूलो रकम छुट्ट्यायौं, जसले ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउँछ । ग्रामीण क्षेत्रले साना–तिना घरेलु र कृषि आधारित साना–मझौला उद्योगहरू आफैंले स्थापना गर्न सक्ने गरी ती कामहरू अगाडि बढायौं । हामीले सहकारीलाई जोड दियौं । लघुवित्त (माइक्रो फाइनान्स) वा सहकारी, जसले जगैदेखि जनतालाई बलियो बनाउँछ र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ, विदेश पलायनलाई न्यून गर्छ, त्यसलाई अघि बढायौं । तराईका जिल्लाहरूमा यस आर्थिक वर्षमा २० हजार गरिबलाई आवासका निम्ति घर बनाएर दिने, जसको धनीपुर्जा छैन, त्यसका लागि पनि सरकारको तर्फबाट व्यवस्था गरिदिने कुरा ग¥यौं ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका जस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि दलित र लोपोन्मुख जातिका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने कामहरू हामीले अघि बढायौं । विभिन्न क्षेत्रका बिरामी नागरिक, जस्तो– मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने वा डाइलोसिस गर्नुपर्नेहरूका मर्कालाई बुझेर राज्यका तर्फबाट दायित्व बहन ग¥यौं ।
संक्षेपमा भन्दा, छिमेकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको हैसियत माथि उठाउने, विकास निर्माणका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणदेखि ‘कनेक्टिभिटी’सम्म र सञ्चार जगत्का कुरा गर्दा मुलुकलाई आधुनिकतातर्फ लैजान स्मार्ट–सिटीहरू निर्माण गर्दै देशलाई नै आधुनिक र विकसित मुलुकका रूपमा विकास गर्नेसम्मका योजनाहरू अघि सा¥यौं ।
समग्रतामा मेरो कार्यकाल अत्यन्त सफल रह्यो । मेरा अगाडि एउटा प्रश्न थियो– लामो समय प्रधानमन्त्रीमा रहने कि समय जतिसुकै होस्, मुलुकका निम्ति महत्वपूर्ण काम गर्ने ? त्यसमा मैले दोस्रो बाटो छानें । आफूले छानेको बाटोमा मलाई सन्तोष छ ।
० प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्दा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू चाहि के महसुस गर्नुभयो ?
पहिलो, नेपालको राजनीति नेपालीहरू आफैंले सञ्चालन गर्ने हो । यो हाम्रो देश हो भन्ने अनुभूति हुनुपर्ने हो । तर, मैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको अवस्थाचाहिँ दयनीयजस्तो देखें, खासगरी राजनीतिक र नेतृत्वको क्षेत्रमा । त्यो एउटाचाहिँ गम्भीर समस्याका रूपमा छ ।
दोस्रो, सञ्चारमाध्यमको विकास भएको छ । तर, त्यो जिम्मेवार तहमा विकास हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा सजिलै जनतामा भ्रम–अन्योल जन्माउन–फैलाउन सक्ने र त्यही उद्देश्यका निम्ति काम गर्नेसमेत देखिन्छ । तेस्रो, कर्मचारीतन्त्र उपयुक्त ढङ्गले चलेको छैन, शिथिल छ । यद्यपि, मैले सहयोग पाइनँ भन्ने होइन, सहयोग पाउने ठाउँमा पाएँ । तर, कर्मचारीतन्त्रको बानी र व्यवहारको तरिका नै बिग्रिएको छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्ने महसुस भएको छ ।
चौथो, आधारभूत राष्ट्रिय हित, जनहित र विकासका प्रश्नहरूमा एकताबद्ध हुनुपर्छ, तिनीहरूमा सबैको साथ हुनुपर्छ । तर, त्यस कुरामा पनि कमी रहने प्रवृत्ति नेपाललाई अगाडि बढाउने कुरामा बाधक छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
० सरकारका उपलब्धिहरूको चर्चा त गर्नुभयो । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के रह्यो भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
यथार्थमा मैले भन्ने गरेको छु– राष्ट्रिय स्वाभिमान, जो शिथिल अवस्थामा पु¥याइएको थियो, त्यसलाई जगाउने काम भएको छ । मूच्र्छित सपनाहरूलाई ब्युँझाउने र आत्मविश्वास गराउने काम भएको छ । त्यसमा जति सफलता प्राप्त भएको छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण त्यही नै हो ।
० तपाईंले विकास निर्माणका ठूला परियोजनाका परिकल्पनाहरू अगाडि सार्नुभएको छ । अब नया सरकारले तिनलाई के गर्छ भनेर संसद्मै पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । तिनको कार्यान्वयन गराउन पार्टीको भूमिका के रहन्छ ?
पार्टी रचनात्मक, सिर्जनात्मक, जिम्मेवार र क्रियाशील भूमिकामा रहन्छ ।
० बीचैमा त्यस्ता परियोजनाहरू छोडियो भने… ?
कसैले चाहेर पनि छोड्न त्यति सजिलो छैन । बढीमा ढिलो गर्न सक्लान् । मैले संसद्मा बोल्दा भनेको थिएँ, ‘हामी यही देशमा छौं’ मैले त्यतिबेला सुरुचाहिँ अङ्गे्रजी वाक्यबाट गरेको थिएँ । पछि के–के भन्यो भनेर साथीहरूले दोहो¥याएपछि यादै भइसक्यो– ‘दिस मोमेन्ट इज नट द इन्ड अफ हिस्ट्री ।’ इतिहासको अन्त्य भएको होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो र हामी यहाँ छौं (वी आर हेयर) । कुनै जिम्मेवारीबाट यसो अलग हुनेबित्तिकै हामी यहाँ छैनौं भन्ने कुरा होइन । फेरि मैले भनेको छु, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि मेरा जिम्मेवारीहरूबाट त राजीनामा दिएको होइन । देश, जनता र लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारीबाट राजीनामा गरेको होइन । म एउटा गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको पार्टीको अध्यक्ष हुँ, संविधान बनाउने, सरकार बनाउने सारा सकारात्मक भूमिका खेल्ने पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँ ।
० निकै ठूला सपना र अठोटसहित धेरै गर्छु भनेर योजनाहरू अघि सार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले चाहेको, इच्छा गरेको, बोलेको र निर्देशन दिएको कति कुरा पूरा हुने स्थिति रहेछ ?
अलिकति ढिलो हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुने स्थिति त भइहाल्छ । हाम्रो प्रशासन यन्त्र एकातिर नराम्ररी, दुःखलाग्दो गरी विभाजित छ भने अर्कातिर काम नगर्ने बानी परेको छ । देश बनाऔं भन्ने भावनाको कमी छ । ढिलो गर्नका निम्ति ती सफल होलान्, तर कार्यान्वयन नै नगर्नेचाहिँ हुन सक्दैन । मैले कुराहरू राख्दा मात्रै पनि जनतामा आत्मविश्वास जागेको छ, स्वाभिमान जागेको छ, जुन कुरा अहिले स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ ।
जब जनता निराश हुन्छन्, देश बर्बाद हुन्छ । जब जनतामा आशावादिता पलाउँछ, तब देश बन्छ । अहिले आशावादिता पलाएको छ, विश्वास पलाएको छ । हामी गर्न सक्छौं र गर्नुपर्छ भन्ने भावना पलाएको छ । त्यसकारण, प्रधानमन्त्रीले चाहेको काम नगर्न सम्भव छैन । जागरणको प्रभावलाई अब कसैले मेटाउन सक्दैन ।
० सरकार गठन गर्दा साना–मसिना, एक–दुई सिट भएका पार्टीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुभयो । तिनीहरूसग न सरकार बचाउन सक्ने क्षमता थियो, न ढलाउन सक्ने नै । तपाईंलाई जब सङ्कट प¥यो, सबैभन्दा पहिला जहाजबाट मुसा निस्किएझैं तिनीहरूले नै साथ छाडे । आखिर त्यसो गर्न किन आवश्यक थियो ?
आवश्यकता नै त थिएन । तर, खासमा गर्ने मैले हो, दृष्टिकोण दिने मैले हो । मैले आधा शताब्दीदेखि जे सोचेर, विश्लेषण गरेर र अध्ययन गरेर आएको छु, त्यस आधारमा देशलाई कता लाने भन्ने योजना मसँग छ । एउटा मन्त्रालय पाउँदैमा अरू कसैले केही उधुम नै गरिहाल्छ भन्ने होइन । त्यसकारण, म गर्छु, मैले गर्दा त्यहाँ कसैले व्यवधान गर्न सक्दैन, व्यवधान गर्दा उसलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सकिहाल्छ । मैले सकेसम्म धेरैलाई समेटेको हुँ ।
० धेरैलाई यस्तो जोडजाड गरी संयुक्त सरकार बनाएर चलाउन कत्तिको गाह्रो रहेछ ? त्यति गर्दा पनि १० महिनाभन्दा बढी टिकाउन सम्भव भएन । एकदम गाह्रो काम रहेछ, होइन ?
अरू कतै र कसैबाट अप्ठ्यारो भएन । कहिलेकाहीँ फोरम (लोकतान्त्रिक)ले अलि सहज नहुने खालका कामहरू गर्न खोज्थ्यो । समस्या माओवादीले मात्रै बनायो, माओवादीका अध्यक्षबाटै सिर्जित हुन्थ्यो र त्यहीँ ठोकिन्थ्यो । मन्त्रीहरूमा त्यस्तो खालको खासै समस्या देखिएन । एकाधमा अलि बुझ्ने सामथ्र्य थिएन । तर पनि मन्त्रीहरूमा त्यसप्रकारको केही अन्यथा देखिएन ।
० हामीले धेरै पार्टीहरूको संयुक्त सरकार चलायौं । यो पहिलो अनुभव पनि होइन । १० महिना त्यहा बस्दा र धेरै पार्टीहरूसग काम गर्दा संविधान बनाउने बेलामा छलफलमा आएका ‘थे्रस होल्ड’ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजस्ता मुद्दाहरूलाई फेरि एकपल्ट बहसमा लैजानुपर्छ भन्ने लाग्यो कि लागेन ?
बहसमा लगेर छाड्ने होइन, ती त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खाली कहाँनेरबाट सुरु गर्ने भन्नेमा मेरो सजगता थियो र छ ।
० एमालेले ती प्रस्तावहरू फेरि संविधान संशोधनको प्रक्रियामा उठाउ“छ ? अगाडि बढाउछ ?
संविधान संशोधन आवश्यक नहुन पनि सक्छ, कानुनबाट पनि कार्यान्वयन हुन सक्छ । संविधानविपरीत नहुँदा कुनै कानुन बदरभागी हुँदैन, कुनै प्रबन्ध बदरभागी हुँदैन ।
० तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान संविधानले नै रोक्छ । त्यसका लागि त संविधान नै संशोधन हुनुपर्छ, होइन र ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा म अझै पुगिसकेको छैन । यद्यपि, प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने हो भने अहिले नेकपा (एमाले)का लागि अनुकूल वातावरण छ । तर, मुख्य कुरा त्यो मात्र होइन, त्यसका अरू पक्षहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
० विकास निर्माणसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरू घोषणा त भए । तर, ती पर्याप्त अध्ययन र योजनाविना फ्याट्ट–फ्याट्ट घोषणा भए भन्ने आलोचना छ । प्रधानमन्त्रीले कतिपय योजनाका लागि अहिले बजेटमै छैन भन्नुभएको छ । यसलाई चाहि कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
दृष्टिकोण (भिजन) बजेटले ल्याउने होइन । दृष्टिकोण भएपछि तत्सम्बन्धमा अध्ययन हुन्छ, त्यसपछि कार्यक्रम बन्छ र अन्तिममा बजेट बन्छ । कुनै नयाँ दृष्टिकोण दियो, नयाँ कुरा भन्यो र त्यसो गर्नुपर्छ भन्यो भने बजेट खोइ भन्ने ? त्यो दरिद्र मानसिकता हो । आजका दिनमा बजेटका कारणले कुनै पनि आयोजना बन्न नसक्ने हालतमा हामी छैनौं । अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले संसद्बाट मलाई सोध्नुभयो, ‘बनाउन त बनाउँछु, तर बजेट कहाँबाट आउँछ, बताउनुस्’ त्यसपछि उहाँसँग भेट भएको छैन । उहाँलाई बजेट चाहिन्छ भने प्रबन्ध गरिदिन म आफैं अग्रसर हुन्छु । पैसा भएर विकास हुने होइन, विकास भएर पैसा हुने हो । हामी विकास गर्न सक्छौं, विकासका थुप्रै बाटाहरू छन् । ठूलो लगानीका आयोजनाहरू पनि गर्न सक्ने ठाउँमा छौं । किनभने, हामी धेरै ठाउँबाट सहुलियत दरमा ऋण लिन सक्छौं । कतिपय ठाउँमा अरूलाई लगानी गर्न दिन सक्छौं । मान्छे लगानी गर्न इच्छुक छन्, सहयोग गर्न इच्छुक छन् । त्यसभन्दा बढी के चाहियो ? आम्दानी हुने ठाउँमा हामी लगानी गर्दछौं, ऋण लिएर लगानी गरे हुन्छ, कमाएर तिर्छौं । त्यसकारण, बजेट छैन भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन ।
० गत वैशाख तेस्रो साता तपाईंको नेतृत्वको सरकारमाथि जुन खालको आक्रमण भयो, त्यो कता–कताबाट भयो भन्ने तपाईंलाई पनि थाहा थियो । त्यसपछि त्यो गठबन्धन जोगाउन हामीले पर्याप्त मात्रामा सावधानी अपनाएनौं कि ?
त्यस्तो गठबन्धन जोगाउनुको अर्थ थिएन । गठबन्धनले के काम गर्ने भन्ने कुरा हो । कामको सर्त हुन्छ नि । त्यही काम गर्छ कि अर्थोक काम गर्छ ? अहिलेको गठबन्धनले गर्ने काम हामी सामेल भएको गठबन्धनले गरेर के मतलब ? गठबन्धन छँदै थियो, सरकार परिवर्तनको कुरा केका लागि आयो ? योचाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो । कहाँबाट त्यो सुरु भयो ? कहाँबाट अगाडि बढ्यो ? खासमा कुराको अर्थ त्यहाँ छ ।
त्यस गठबन्धनको निरन्तरताको अर्थ केही पनि छैन । ती काम, जुन मैले गरेको थिएँ, नगर्नें हो भने मै प्रधानमन्त्री रहिरन सक्थेँ । मैले सुरुमा भनें नि– लामो समय प्रधानमन्त्री रहने कि प्रधानमन्त्री भएका बेला कामचाहिँ महत्वपूर्ण गर्ने ? मलाई थाहा थियो, छोड्नु पर्न सक्थ्यो । किनभने, माओवादीजस्तो पार्टी सँगै लिएर हिँडिएको थियो, जसको इतिहास सबैलाई थाहा छ, जसले विदेशीसँग बकाइदा कागज गरेर देशमा वितण्डा मच्चाएको छ र जो विगतमा अरूले गरेको सहयोगका लागि किञ्चित कृतज्ञ छैन । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा यति धेरै काम गरियो, यसरी लागियो तर पनि शान्ति प्रक्रिया नै भएन भन्छ । कहिले मेरा नजिकका वकिलले ‘यसो भने…’ भन्याछ, कहिले के भन्याछ । कोही व्यक्ति होला, एमाले समर्थक कसैले केही बोल्यो होला । त्यो उसको स्वतन्त्र कुरा हो नि । तर, हामीले उनीहरूको जस्तो क्षुद्र भाषा कहिल्यै बोलेनौं ।
जुन दिन मैले चीनमा पारवहन र आवागमनसम्बन्धी सम्झौता गरें, त्यसै दिनबाट यहाँ खेल सुरु भइसकेको थियो । हुन त सरकार बन्नै नदिने र बन्नासाथ ढाल्न लाग्ने काम भइरहेकै थियो । अलिकति धकेल्दै त्यसलाई पर लगियो । त्यसका लागि पर्याप्तभन्दा बढ्ता गरियो ।
समीकरण जोगाउनका निम्ति पहिलो कुरा त इमानदारी हुनुप¥यो । पहिले हामीले काङ्ग्रेससँग सम्झौता ग¥यौं, संविधान बनाउँदासम्म र संविधानपछि चुनाव गराउँदासम्मका लागि । तर, काङ्ग्रेस इमानमा अड्न सकेन । त्यसपछि हामीले नयाँ ढङ्गले चल्नुप¥यो, काङ्ग्रेसविना सरकार बनाउनुप¥यो । काङ्ग्रेससँग सहमति हँुदा संविधान बनेपछि सरकार बन्दा माओवादी वा अरूलाई नलिने भन्ने थिएन । तर, पछि काङ्ग्रेस आफैं सरकारमा आएन । किनभने, उसलाई कतैबाट आश्वासन दिइयो– ‘तिम्रै नेतृत्वमा हामी सब कुरा गराउँछौं, राष्ट्रपति तिमी नै, सबै चीज तिमी नै बन्ने अवस्था बनाउँछौं ।’ त्यसपछि काङ्ग्रेस उत्ताउलियो र सबै चीज लिनका निम्ति उसले इमान त्याग्यो । अनि, बाँकी सम्भव भएसम्म अरूलाई लिएर हामीले सरकार बनायौं ।
हामीले सदैव वाम समीकरण भन्ने भ्रम पनि राख्नुहुँदैन । किनभने, वाम भनेको के ? कहाँनेर छ माओवादीमा वामपन्थ ? नाम माओवादी वा कम्युनिस्ट भएको हुनाले उसलाई वामपन्थी मान्नुपर्ने ?
हामीले सदैव वाम समीकरण भन्ने भ्रम पनि राख्नुहुँदैन । किनभने, वाम भनेको के ? कहाँनेर छ माओवादीमा वामपन्थ ? नाम माओवादी वा कम्युनिस्ट भएको हुनाले उसलाई वामपन्थी मान्नुपर्ने ? माओवादीले वामका नाममा हिजो उपद्रो मच्चाएको थियो । आज अपवित्र गठबन्धन गरेर भीषण दक्षिणपन्थी व्यवहार गरिरहेको छ । के त्यसैलाई वाम भन्ने ? वाम समीकरण भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । किनभने, मैले उसलाई कहिल्यै परिवर्तनका पक्षमा भेटिनँ । नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा माओवादीका नेताहरूको प्रतिनिधिमण्डल नै आयो र भन्यो– ‘माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा हामीलाई ८ अर्ब ६० करोडको निःशुल्क सेयर दिनुपर्छ ।’ लडाकुका नाममा लिने उनीहरूलाई दिन हो र ? लडाकुका नाम हिजो लिइएको अर्बौं रुपैयाँ ती लडाकुले पाए र ? अहिले पनि त्यसैगरी माओवादीले सेयर लिन चाहेको थियो ।
उनीहरूले ‘यसका नाममा १० लाख दिनुपर्छ, यसका नाममा २ लाख दिनुपर्छ’ भनेर पैसाको मात्रै कुरा गरे । राज्यकोषबाट अर्बौं रकम माग गरे । कुरा मिलेन । मसँग उनीहरूको जम्माजम्मी माग नै यत्ति थियो । देश र जनताका निम्ति उनीहरूले कहिल्यै छलफल गरेनन् । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, भूकम्पबाट प्रभावितहरूको पुनर्निर्माणजस्ता एजेन्डा उनीहरूले कहिल्यै राखेनन् । ९–१० महिना काम गर्दा ‘फलानो ठाउँमा हाम्रो मान्छे हुनुपर्छ, त्यहाँ हाम्रो मान्छे नियुक्त हुनुपर्छ, हामीले यति पैसा पाउनुपर्छ’ भन्नेबाहेक उनीहरूको कुनै एजेन्डा पाइनँ । मैले कति पल्ट राजनीतिक प्रश्नहरूमा कुरा गर्दा पनि अरू कुरा कहिल्यै आएन । जहिले आयो– त्यही खाऊँ–खाऊँ र लाऊँ–लाऊँको मात्रै कुरा । त्यसकारण, उनीहरूलाई नेतृत्व दिएरै भए पनि त्यो समीकरण कायम राख्न त्यति लोभिनुपर्ने कारण नै रहेन ।
० नेकपा (संयुक्त)बाहेक सरकारमा आउन चाहने वामपन्थीहरूलाई आफूपछिका महत्वपूर्ण दर्जा दिएर संयुक्त सरकार बनाउनुभयो । एउटा प्रश्न के गरिन्छ भने माओवादीलाई नेतृत्व दिएर त्यो गठबन्धन कायम गर्न त सकिन्थ्यो नि, त्यता कुनै पहल नै गर्नुभएन ?
त्यसो गर्दा के हुन्थ्यो ? माओवादीसँग हामीले चुनावसम्मका निम्ति सम्झौता गरेका थियौं । उसले बीचैमा अरूको उक्साहटमा नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर बेइमानी गरेको हो । जेसुकै भने पनि हाम्रो राष्ट्रवादी धार (एप्रोच)प्रति जजसको गम्भीर आपत्ति थियो, तिनैले उसलाई बोकेर कुदेका हुन् । त्यसकारण, त्यस्तो शक्तिसँग समीकरण कायम राख्नुको अर्थ के हुन्थ्यो र ?
अर्को कुरा– विजय गच्छदार, कमल थापासमेत भएर हामीले धेरैपल्ट त्यो समीकरण कायम राख्न भन्यौं । तर, रिमोट जहाँ थियो, त्यहाँबाट राख्न नदिने भन्ने खबर आएपछि माओवादी त्यो सहमति तोडेर गयो । अनि बीचमा एउटा हल्ला चलाइयो, तथाकथित भद्र सहमति (जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट)को । माओवादीमा ‘जेन्टलम्यान’ को छ र ‘जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट’ हुन्छ ? कुनै कुरा भए उसले त्यसलाई यसरी दुरुपयोग गर्छ, व्यापार गर्छ । उसले लगातार सरकारमाथि आक्रमण गर्ने, काम गर्न नदिने र यसको हैसियत समाप्त पार्ने योजना र षड्यन्त्र रच्यो ।
० तपाईंले चुनावसम्मका लागि हाम्रो सहमति भएको थियो भन्नुभयो । त्यसो भए कुन बिन्दुमा आएर माओवादी यसरी बिच्कियो होला त ?
बिच्किएको होइन, प्रधानमन्त्री हुन नपाएर हामीसँग बसेको थियो । उसले दुई वर्षको सम्झौता धोकापूर्ण ढङ्गले गरेको थियो । ८१ सिट भएको माओवादीले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबै पाउने हो र ? के उसको त्यही हैसियत हो ? हामीले त उसलाई आवश्यकताभन्दा बढी दिएका थियौं । के कारणले प्रधानमन्त्री नभई नहुने ? फेरि उसले हामीलाई ‘यस्तो गरौं’ कहिल्यै भनेन । अचानक वैशाख २२ गते बेलुका टिमसहित आएर माओवादीका प्रमुख नेताले भन्नुभयो– ‘मलाई काङ्ग्रेसले समर्थन ग¥यो, म प्रधानमन्त्री हुने भएँ, काङ्ग्रेसले समर्थन गरेपछि तपाईंसँग किन बस्नु ? त्यसकारण म उता लागें । तपाईंहरू पनि सँगै जाने हो भने समर्थन गर्नुस् ।’ त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग ‘यसरी अगाडि जाऔं’ भन्ने कुरै भएको थिएन । बरु, मैले नै कुरा गरेको थिएँ– ‘बेइमानी ढङ्गले नचलौं है’ हामीले जति राम्रो काम गरे पनि टाउको गिन्तीको खेल हुने प्रणालीमा माओवादी गएपछि हामी हाथ्र्यौं, हामीसँग सरकार चलाउने सङ्ख्या पुग्दैनथ्यो । त्यो त हामीलाई थाहै थियो । त्यसकारण, मैले नै भनें– ‘यो टाउको गिन्तीको खेलमा तपाईंहरू छुट्टिएपछि हाम्रो सङ्ख्या पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा हामी छलफल–सल्लाह गर्न सक्छौं । तपाईंहरूलाई केही लाग्छ भने भन्नुस् है । यद्यपि, हाम्रो सम्झौता चुनावसम्मका लागि हो ।’
हामीले त्यसो किन भनेका थियौं भने हामी हाम्रा देशभक्तिपूर्ण काम, विकासका एजेन्डा र आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रालाई अघि बढाउन चाहन्थ्यौं । तर, यो कुरा पाच्य भएन र रोक्न अहिलेको षड्यन्त्र भएको हो । त्यसका लागि प्रयोग भएका मतियारहरू र यो आपराधिक डिजाइन त पछि थाहा हुन्छ । त्यस्ता आपराधिक डिजाइनका अङ्गहरूसँग सहमति गरेर त्यो गठबन्धन कायम राख्दा हामीले अघि सारेका काम गर्न सकिन्थ्यो होला र ? प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि मौका मिल्यो भने उहाँसँग कुनै राजनीति छैन, दर्शन छैन, विचारधारा छैन, कार्यक्रमिक अवधारणा छैन । राजनीति छ भने एउटै कुरा छ– आखिर कुर्सी नै रहेछ एक …।
० माओवादीहरूको गुनासो रहेको छ– हामीले जहिले पनि एमालेलाई सघायौं, एमालेले हामीलाई सघाउदैन । माओवादीचाँहि समर्थक र मतदाता मात्रै हो र ?
अस्ति भाषणमा एउटा कुरा सुनियो– ‘मैले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ“, झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ, केपी ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाएँ ।’ के उहाँले समाजसेवा गर्नुभएको हो ? अनि, एक्लै प्रधानमन्त्री बनाउन पुग्ने बहुमत उहाँसँग कहिले थियो ? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको कसको मतले हो ? मान्छेको स्मरणशक्ति नै छैन भनेको कि क्या हो– पहिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री एमालेले बनाएको होइन र ? कहीँ न कहीँ, कुनै पनि हिसाबले हामीले जबसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचनका निम्ति संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था गरेनौं, नियमावलीमा व्यवस्था गरेनौं, त्यसबेला १७ पल्टसम्म चुनाव भएको होइनर ?
जब काङ्ग्रेससँगको टक्करमा उसलाई छेक्न झलनाथजीलाई दिएको न हो । ६ महिना धुरु–धुरु रुवाएपछि झलनाथजीले ‘यस्ताको समर्थनमा बस्नुभन्दा त नबस्नु नै ठीक’ भन्दै छाडेर हिँड्नुपरेको होइन ? अनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेले भोट दिएको थिएन ? उहाँले कसैलाई गरेको समर्थनचाहिँ समाजसेवा भयो । महान् स्वयम्सेवी । उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, सभामुख, आठवटा छानेका मन्त्रालय दिइयो । त्यसभन्दा बढी के पाउने हैसियत थियो ? उहाँहरूले केही नलिएर बाहिर बसेर गौदान मात्र ग¥या हो र ? उहाँले अहिले भेट्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री बनाइदिने । तर, याद राखे हुन्छ, उहाँ मेरै रिसले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँलाई जसले मत दियो, जसले काँधमा बोक्यो, त्यो मलाई ढाल्नका लागि न हो, उहाँलाई के–के न गरौं भनेर बोकेको होइन । त्यति नबुझेर त्यत्रा ठूल्ठूला कुरा किन गर्नु फेरि ?
० विगतमा माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिनै हुन्न भनेर एमालेमा बहस पनि भयो । तपाईंको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयसहित उसले रोजेका आठवटा मन्त्रालय दिइयो । के माओवादीले लामो समय समर्थन गर्छ भन्ने लागेर त्यसो गरिएको हो ?
त्यो कोसिस हो । किनभने, मलाई देश र जनताका लागि केही गर्नुु थियो । नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु थियो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई माथि उठाउनु थियो, स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा एउटा मात्रै देशसँगको निर्भरता कम गर्नु र हटाउनु थियो र देशभित्र विकासका कामहरू अगाडि बढाउनु थियो । साथै, संविधानको कार्यान्वयन गर्नु थियो । ती कामहरूमा निहुँ नखोजोस्, चित्त नदुखाओस् भनेर चाहिनेभन्दा बढी र गर्नुपर्नेभन्दा बढी नै गरिएको थियो । गृह मन्त्रालय दिँदा पनि मैले माओवादी अब सप्रिएला भन्ने सोंचेको हुँ । तर, ऊ ‘आखिर कुर्सी नै रहेछ एक…’ भन्नेमै रहेछ ।
० सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो, तपाईंले बीचमा अनेक दबाब हुँदा पनि राजीनामा दिन मान्नुभएन । जस्तालाई तस्तै पराजित गर्न नयाँ समीकरण बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले सोच्नुभएन ? त्यो सम्भव नभएर नसोच्नुभएको हो ?
सरकार बनाउनु वा त्यसमै अडिनु नै मेरो र मेरो पार्टीको लक्ष्य/उद्देश्य होइन । के गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । सरकार बनाएर जसलाई पायो, त्यसलाई सरकारमा सामेल गराएर हामीले गरेका कामहरूलाई बदनाम गराउने ?
उल्टाउने ? खारेज गर्ने ? मेटाउने ? सरकारमा गएपछि त चुप बस्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ । नत्र छोड्नुपर्छ । त्यस असहज अवस्थामा हामीले अर्को समीकरण किन बनाउने ? खालि समीकरणका लागि राजनीति गर्नुहँुदैन । उद्देश्य, विचार र गन्तव्यको राजनीति गर्नुपर्छ । त्यसकारण, अनुचित ढङ्गले समीकरणको राजनीति गरिएन, त्यसो गर्नु वाञ्छनीय ठानिएन ।
० प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्मा दिएको अन्तिम मन्तव्य र अरू सन्दर्भहरूमा पनि तपाईंले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक चासो नराख्न छिमेकीहरूलाई सुझाव दिइरहनुभएको छ । के कारणले पटक–पटक यस्तो भनिरहनुभएको छ ?
यति स्पष्ट कुरालाई फेरि थप भनिरहनै पर्दैन, सबैले बुझेका छन् । किन भन्नुप¥यो र थप ?
० भारतको राजकीय भ्रमण गर्दा तपाईंले निकै राम्रो सम्मान प्राप्त गर्नुभयो । फर्केर नेपाली जनतासमक्ष दुई देशबीचका असमझदारीहरू हटे भन्नुभयो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । आखिर के कारणले त्यस्तो भयो ?
भारतमा एउटै खालको सोच र दृष्टिकोण छैन । भारतमा स्वार्थका विविधता छन्, दृष्टिकोणका विविधता छन् । मैले अलिकति के महसुस गरेको छु भने भारतका केही एजेन्सी र केही मिडिया किन हो, गलत खालको, प्रभुत्ववाला चिन्तनबाट ग्रस्त छन् । उनीहरूले अनुचित र अनावश्यक प्रचारबाजी गरिरहेका छन्, जसले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउँदै लैजाने, बिगार्ने र राम्रो हुन नदिने काम गरिरहेको छ । हामी त भारतका मित्र हौं । मित्र नभएर हामीले केही गर्नु नै छैन । भारतका जायज चासो, चिन्ता र सरोकारहरू हामीले बुझेका छौं र त्यसमा हामी सकारात्मक पनि छौं । तर पनि, केही–केहीले वातावरण बिगार्ने खेती गरिरहन्छन् । त्यस्तो खेती भारतको केन्द्र र राजनीतिक नेतृत्व तहबाट अस्वीकार हुनुपथ्र्यो । मलाई विचित्र लागेको छ, यस्तो कुरा अस्वीकार गरेको देखिएन । दुई वर्षका लागि कसैले एउटा खेल–तमासा देखाउँछ र आफ्नो स्वार्थअनुसार चाल चल्छ भने भारतको राष्ट्रिय नेतृत्व र राजनीतिक तहले त्यस्ता कुरा नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो । त्यसमा नियन्त्रण गर्न नसकेको हो वा के हो, मैले त्यस्तो पाइनँ ।
म भारत गएँ र फर्किएपछि ‘सम्बन्ध सप्रियो’ भनें । सप्रिएकै हो । विशाखापट्टनम् बन्दरगाह, बाटो, प्रसारण लाइनजस्ता धेरै कुरा भए । हामीले राम्रो गरेका थियौं । मैले भनें– ‘अब राम्रो भयो । केही असमझदारी (मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ)हरू थिए, हटे ।’ हामी भारतका दुश्मन होइनौं, हुनै सक्दैनौं । हामी भारतका विरोधी होइनौं, हुनै सक्दैनौं । हामी भारतका मित्र हौं, मित्र भएर, मिलेर काम गर्न चाहन्छौं । तर, हाम्रा आन्तरिक मामिलाहरूमा, हरेक स–साना कुराहरूमा हात हाल्ने र समस्या खडा गर्ने काम नहोस् । हाम्रो चाहना त्यही हो, हामीले त्यही भनेका हौं ।
भारतसँग सम्बन्ध सामान्य भएको हो । नाकाबन्दी थियो, हटाइयो । म राजकीय भ्रमणमा गएँ । तर, भारतका नाममा कसैले केही यताउता गर्छ र त्यसमा चुक्छ भने हाम्रो के लाग्छ र ? अहिले नेपालमा जुन परिवर्तन भयो, त्यसमा यस ढङ्गले आउनु हुँदैनथ्यो । जो आए, जसरी आए, ती त भारतकै नाममा आएका छन् । त्यो हुनु राम्रो थिएन ।
० तपाईंको कार्यकालमा चीनसँग केही ऐतिहासिक महत्वका सम्झौताहरू भएका छन् । त्यही कारणले त्यही बिन्दुबाट नेपालमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको तपार्इंंले माथि नै उल्लेख गर्नुभयो । यहीबेला नेपालमा नया“ सरकार बन्दा देशभित्र भन्दा छिमेकतिर बढी खुसियाली छायो । तपाईंले हेर्दा यी कुराहरूको बीचमा केही सम्बन्ध छ कि छैन ?
बेसरी छ । जसले ग¥यो र जो सफल भयो, उसले ‘हामी सफल भयौं, हाम्रो पुनरोदय भयो (वी केम ब्याक)’ भन्यो । मैले त्यही भनेको हँु, यस्तो नहुनुपथ्र्यो । हाम्रा आन्तरिक कुराहरूमा रुचि नराख्नुस्, यसबाट केही मान्छेहरूले आफ्नो स्वार्थ त पूरा गर्लान्, तर नेपाली जनतामा भारतसँग असहमत हुने मात्रा र भारतले ठीक गरेन भन्ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण त बढ्दो छ । त्यो हामी कसैले त गरेको होइन । हामी त मित्र हौं, मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्छ भन्छौं । भारतले मित्रवत् व्यवहार गरोस्, हामी चाहन्छौं । हामी भारतको अहित चिताउँदैनौं, भारतले हाम्रो पनि अहित नचिताओस् । बस् ।
० भारतले नेपालमा जे गरिरहेको थियो, त्यही कुरा तपाईंको नेतृत्वको सरकार हुँदा चीनले ग¥यो भनेर भारत अलिक डराएको हो भनिन्छ नि ?
चीनले यहाँ न कुनै सरकार परिवर्तन गर्ने न त कुनै प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने काम गरेको छ । उसले यहाँ हस्तक्षेप गर्ने कुनै काम गरेको छैन ।
० पहिला राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्ने माओवादी अध्यक्षले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा तपाईंको सरकारले ‘कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको’ आरोप लगाउनुभयो । गठबन्धनमा यस विषयमा कहिल्यै केही छलफल भएको थियो ?
कहिल्यै पनि भएन । यो कुरा उहाँहरूले उठाउने पनि होइन । उहाँसँग कुनै विचार नै छैन, आदर्श छैन । आदर्शहीन मान्छेले लाभका निम्ति काम गर्छ, छलफल गर्दैन । उहाँहरूले यस्तो गर्नुपर्छ, कहिल्यै भन्नुभएन । सबै कुरामा जस लिन खोज्ने, तर प्रकट ढङ्गले भन्न पनि नसक्ने । आँ–ऊँ, आँ–ऊँ गरेर छटपटाएर त भएन नि । खुलस्त भन्नुप¥यो । मभन्दा अगाडिको सरकार, जोजसलाई भारतले बहुत विश्वास गरेको भनिएको छ, त्यसले सम्बन्ध बिगारेर नाकाबन्दीमा पु¥याएको थियो । प्रयासहरूबाट ठीक ठाउँमा ल्याइयो । त्यसलाई बिगार्न केही मानिस क्रियाशील थिए । त्यो क्रियाशीलतामा नेपालका लोभी, पापी, स्वार्थी, आदर्शहीन र पाखण्डीहरू, जो प्रयोग गर्न सजिला थिए, प्रयोग भए ।
० तपाईंको नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न त त्यही मधेस कार्ड नै प्रयोग भयो । त्यही देखियो होइन, अन्तिममा ?
होइन । मधेस कार्ड त असफल भइसकेको थियो । बरु, अब बौराउने कोसिस हुँदै छ । प्रयोग त माओवादी भयो, जो सरकारमै थियो । अहिले त ठीक छ, लौ प्रधानमन्त्री लियो, भविष्यमा के–के लिन्छ त ? एकपल्ट वा दुईपल्ट वा तीनपल्ट वा चारपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुमा के फरक छ ?
० तपाईंको कार्यकालमा रक्सौलमा, सीमाक्षेत्रमा नाकाबन्दी भयो । त्यसअघिदेखि नै जारी मधेस आन्दोलनका नाममा ४४/४५ जनाको ज्यान गयो । पछि रत्नपार्कमा धर्ना भयो । त्यो सबै गर्दा संविधान पुनर्लेखन गर्न भनिएको थियो । तपाईं हट्नासाथ त यी सबै माग सकिए । यसको मतलब मधेस समस्या पनि त रहेनछ ?
समस्या त छँदै थिएन नि । हामीले सधैंभरि भन्दै आएका थियौं, दबाबका निम्ति ती सबै काम भएका हुन् । त्यो दबाब काङ्गे्रससमेतलाई थियो । विधान बनाइसकेपछि, घोषणा रोक्न नसकेपछि र घोषणा भइसकेपछि नाकाबन्दीजस्तो कुरामा जानु हुँदैनथ्यो । किनभने, संविधान त बनिसक्यो नि । असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि ५ गतेबाट नाकाबन्दी गर्नु अनुचित थियो, अनुपयुक्त थियो । हालै संसद्मा बोल्दा मधेसी प्रतिनिधिहरूले भने– ‘अघिल्लो सरकारका पालामा केही पनि भएको थिएन, गरिएको थिएन । यो सरकार आएपछि समस्या समाधानको बाटो गतिसाथ समात्यो ।’ आन्दोलनमा मारिएका परिवारलाई १० लाख दिने कुरा अघिल्लै सरकारले गरेको हो र दिई पनि सकिएको हो । नकच्चरो ताल भन्छन् नि ।
अघिल्लो सरकारले कामै गरिसकेको छ, अहिले निर्णय गरिँदै छ । घाइतेको उपचार गर्ने भन्छ, उपचार त यहाँ मात्रै होइन, विदेशमा समेत लगेर गराइएको छ, पैसा दिइएको छ । जहाँसम्म छानबिन गर्ने माग छ, हामीले गरौं, समिति बनाऔं भनेकै हौं । तर, उहाँहरूले मान्नुहुन्न । अनि अहिले वास्ता गरिएन भन्ने ? ‘३६ पटक वार्ता भयो’ त उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ । निहुँ खोजेर जाने, सहमतिमा नआउने, बोलाउँदा वार्तामा नआउने र सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्ने अनि सरकार परिवर्तन भएपछि सबै सिद्धियो ?
० संविधान पुनर्लेखनको माग छाडेर तीन बुँदेमार्फत सहमतिमा आउनु त सकारात्मक नै भयो नि । समस्या त समाधान भयो नि ?
समस्या नै थिएन । समाधान पहिल्यै भइसकेको थियो । रत्नपार्कको अनशन पनि उठिसकेको थियो । के थियो र बाँकी ?
० तपाईंले पनि भन्नुभयो– वार्ताका लागि यति धेरै प्रयत्न भए, संविधान संशोधनको कुरा अहिले पनि चर्चामै छ । यसमा पार्टीको भूमिका के रहन्छ ?
गर्नुपर्ने संशोधन हामीले गरिसकेका छौं । उहिल्यै दुईबुँदेमा सबै समेटिएको छ ।
० त्यसो भए अब संविधान संशोधन आवश्यक छैन ?
संविधानका अरू विभिन्न ठाउँमा आवश्यक छ । तर, उहाँहरूले भनेका ठाउँमा आवश्यक छैन ।
० त्यसका लागि आफूसँग एक तिहाइ बरकरार राखेरै भूमिका खेल्छ पार्टीले ?
पर्दै–पर्दैन । जतिजना भए पनि, जे भए पनि हामी देशको दूरगामी अहित हुने खालका कुरा हुन दिँदैनौँ । यो सङ्ख्याको मात्रै हिसाब होइन, राजनीतिको हिसाब हो । यसका निम्ति हामी जुनसुकै छोरमा पुग्न तयार छौं, त्यो बुझे हुन्छ । यत्रा बेइमानी गरेर त्यसपछि देशलाई नोक्सान पार्ने संविधान संशोधन ? अझ हामीसँग अपेक्षा गर्ने ? कति सतही सोच हो ?
० विगतमा तपाईंले माओवादीको आलोचनामा राष्ट्रव्यापी रूपमै पीडितहरूको आवाज मुखरित गर्नुभयो । बीचमा संविधान निर्माण र यो १० महिनाको शासनले माओवादीसँग तपाईं पनि सकारात्मक हुनुभयो, मिल्नुभयो, । यो बुझेर भएको थियो कि नबुझेरै ?
म नबुझीकन किन काम गर्छु ? बुझेरै भएको छ । मैले माओवादीलाई सिध्याउन खोजेको होइन, सच्याउन खोजेको हुँ । त्यसकारण मैले आलोचना वा सहकार्य गरिरहँदा दुवै अवस्थामा सच्याउने हिसाबले र त्यही उद्देश्यअन्तर्गत नै गरेको हुँ। अब माओवादीका सम्बन्धमा धेरै टाउको दुखाइरहनु परेन । किनभने, अलिक समय प्रतीक्षा मात्रै गर्नुपर्छ, अब माओवादी कुनै शक्तिका रूपमा बाँकी रहेन । माओवादीको छिन्नभिन्न अवस्था र अवसानको स्थिति भइसक्यो भने हुन्छ । त्यसैले, अब अहिलेको संसद् रहेसम्म केही समय माओवादी समस्या रहन्छ, त्यसपछि रहँदैन ।
० त्यसो भए माओवादीसँग सहकार्यको गुन्जायस छैन ?
उसले गल्ती महसुस ग¥यो र आत्मालोचना ग¥यो भने सहकार्यका सम्बन्धमा विचार गर्न पनि सकिन्छ । नत्र, जे ग¥यो, जसका लागि ग¥यो र जसका लागि गर्दै छ, त्योसँग केको सहकार्य ?
० पार्टी लामो समयपछि प्रतिपक्षमा पुगेको छ । अब पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा जान पार्टीले तत्काल के कार्यक्रम ल्याउँछ ?
मैले भन्ने गरेको छु– नेकपा (एमाले) ले जनतालाई सचेत गर्नुपर्छ र सङ्गठित गर्नुपर्छ, गर्दै आएको छ । अब झन् योजनाबद्ध ढङ्गले यो काम गर्नुपर्छ । अब हामी केही दिनभित्र स्थायी कमिटीको बैठक बस्छौं । त्यसपछि एक महिनाभित्रै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक बस्छौं । त्यहाँबाट नीति तय गर्छौं, कार्यक्रमहरू बनाउँछौं र तीव्रताका साथ आगाडि बढ्छौं । एउटा कुरा सबैले थाहा पाइराखे हुन्छ– नेकपा (एमाले)को विकास र सफलताको बेगलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
० तपाईं आफैं नेतृत्व गरेर कम्तीमा प्रदेश तहसम्म जनता र कार्यकर्ताको बीचमा जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ ?
अवश्य जान्छु ।